Knowledges Zone: ဖုန်းခေါ်သံများ ( Ringtones )
ဖုန်းခေါ်သံများ ( Ringtones )
Cellphone တွေအခုခေတ်ကြီးထဲမှာ လူငယ်တိုင်းလိုလိုအတွက် နေ့စဉ်သုံး မရှိမဖြစ် Electronic Gadget တစ်ခုအနေနဲ့ အရေးပါလာပါတယ်။ Phone တွေ fancy ပိုဖြစ်လာပြီး သုံးလို့ရတဲ့ Function တွေလည်းပိုများလာပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှာ Ringtones (ဖုန်းလာရင် မြည်တဲ့အသံ) ကိုအမျိုးမျိုး မရိုးအောင် ပြောင်ပြီးသုံးချင်သူတွေအတွက် ဒီ Page လေးကို လုပ်လိုက်တာပါ။
အေသင်ချိုဆွေ - လေပြေ | [Download]
စန္ဒီမြင့်လွင် - လာမချုပ်နဲ့ | [Download]
ဇင်အောင် - ကောင်မလေး | [Download]
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း - လမ်းမကြီးရဲ့ဘေး | [Download]
ရဲလေး - Number One | [Download]
Lady GaGa - Love Game | [Download]
4Minute - Making Love (OST Personal Taste) (Korea) | [Download]
Big Bag - ကြုံရင်ပြောပေးပါ | [Download]
မျိုးကြီး - ပြန်လာချိန်လေး | [Download]
B.o.B - Nothing on You | [Download]
Bunny Phyo - ချစ်တယ်ဟုတ် | [Download]
Project - 1 - ကြီးကြီးသေးသေး | [Download]
Bunny Phyo - နှစ်ပတ်လည် | [Download]
လွှမ်းပိုင် - Miles Away | [Download]
VIP - ဆရာကျလွန်းတယ် | [Download]
လေးဖြူ - စာမျက်နာ ၁၅ | [Download]
9one feat. အိမ့်ချစ် - ကမ္ဘာငယ်လေး | [Download]
ရိမ်းမိုး - သူလေး | [Download]
Rihanna - Take A Bow | [Download]
Gtone feat. ကြက်ဖ - ရှိုးပွဲ | [Download]
Bobby Soxer - မနှုတ်ဆက်ချင်ဘူး(Rap) | [Download]
L ဆိုင်းလ်ဇီ - မလွမ်းရဲသေးဘူးမောင်ရယ် | [Download]
Moez feat. Jenny - ပြန်လိုချင်တယ် | [Download]
ဧကရီ - အချစ်တို့ပြန်ပေးပါ | [Download]
ကောင်းမြတ် - ချစ်ခွင့်ရချင်ပြီ | [Download]
Iszani - မနိုးထလိုက်ပါနဲ့ | [Download]
လွှမ်းပိုင် - မနှုတ်ဆက်ချင်ဘူး(Rap) | [Download]
Miley - Butterfly fly away | [Download]
psst! - Funny Ringtone | [Download]
Sweet Tone | [Download]
iphone sms | [Download]
3D Bells | [Download]
လွှမ်းပိုင် - ခုန်လိုက် | [Download]
Drake - Find Your Love | [Download]
Scary Ringtone | [Download]
Mario Dies | [Download]
You Know You Make Me Wanna | [Download]
Justin Bieber & Sean | [Download]
Tuna - လွမ်းရင်းနဲ့ရူးမှာပါ | [Download]
Nicki Minaj - Your Love | [Download]
ဖြိုးကြီး ၊ ဆုန်သင်းပါ - မေ့နေပြီလား | [Download]
အေသင်ချိုဆွေ - တင်းတယ် | [Download]
ကောင်းကောင်း ၊ မို့မို့လွင် - မင်းကိုသတိရရင် | [Download]
MRTV Ringtone | [Download]
Enrique Iglesias - May Be | [Download]
မေသင်္ကြန် - ရွှေမန်းဆီသို့ | [Download]
စိုင်းစိုင်း feat. သီရိဆွေ - အမြဲတမ်းယုံကြည်တယ် | [Download]
Love The Way You Lie | [Download]
2ne1 - You And I | [Download]
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေ အပေါ်မှာ စာလေးတွေရေးမယ်......
သင့်ဘ၀မှာ အခက်အခဲတွေကို အောင်မြင်အောင် လွယ်ကူစွာေ...
နိုင်ငံတကာ Mp3သီချင်းပေါင်းစုံ တစ်နေရာတည်းမှာ Down...
ကာတွန်းရုပ်ပြ စာအုပ် ထုတ်ကြမယ်
ကိုယ့်စက်ထဲက hardware အမျိုးစားတွေကိုလွယ်လွယ်သိနို...
swish max3 crack ဖိုင်ထည့်နည်း(သို့) flash songsတေ...
ငါး နှင့် ကျန်းမာရေး
ကွန်ပျူတာကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ သုံးစွဲခြင်းကြောင့်...
TV, Movies, Radio ,Fashion show , Miss lady showမျ...
Photobucket.com မှ ပုံများကို အနက်ရောင် အ၀ိုင်းလေး...
သီဟသူ Google Page နောက်ခံပြောင်းကြမယ်
URL or Dircct Link ပြုလုပ်နည်း
အုန်းသီးတစ်လုံးရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်
Face Book မှ အခမဲ့ အီးမေး ၀န်ဆောင်မှုကို စတင်
Add Custom Icons To Labels In Gmail
How To: Edit Start Up Programs To Speed Up
၃၂ပါး သမိုက်ထားသော ၊ယောင်္ကျားမြတ်တို့ ၏ လက္ခဏာ
၀င်းဒိုး password ကို မိမိမျက်နှာနဲ့ ပေးကြရအောင်
သင့်နှလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးနှင့် အဆိုးဆုံး လေ့ကျင်...
အဲဒါလေးကတော့ ringtone maker လေးပါ..... ကိုယ်ကြိုက်...
ရိုးရိုးဓါတ်ပုံကို 3D ပုံစံပြောင်းမယ်...
ကျော်ခွဖို့ ပရုတ်ဆီလိုချင်သူများနဲ့ ကျော်ခွရင်အဆင်...
ပြသနာကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းကြမှာလဲ......................
Gtalk Translation အကောင့်တွေပါ...
စိမ်းလန်းသော ပါတ်ဝန်းကျင်တွင် ၅ မိနစ်ခန့်နေခြင်း...
video တွေကို လိုသလို လွယ်လွယ်လေးဖြတ်မယ်...
Sony Ericson မှာမြန်မာဖောင့်ထည့်မယ်..
AVG 2011 license ကတော့ 2018
ပုံတွေ ချုံ့မယ် ချဲ့မယ်
Skype ဖြင့်နိုင်ငံတကာသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပြီ
Shot cut လေးတွေပါ...